vendredi, 18 octobre 2019 12:38
Antohomaro - Sambava: Taolam-paty 96 nampisavoritaka ny mponina
Omaly alakamisy 17 oktobra, andiana ankizy sendra nilalao no taitra raha nahita valizy iray mbola nihidy amin'ny gadanà, ka nifarombahan'izy ireo ny entana satria nihevitra izy ireo tamin'ny voalohany fa vola na zavatra sarobidy. Raikitra ny adivarotra fa izay nahita azy voalohany no mahazo anjara be noho ny hafa. Voavohan’izy ireo ilay gadanà nihidy ka vao nisokatra ilay valizy vao samy nanao tongotra an-katoka ka nampandre ireo olobe tao an-tanàna.
Nanao be midina niaraka tamin'ny lehibeny Fokontany Antohomaro, ary ity farany no niantso ny Zandarmaria Sambava, izay eo amin'ny 8km miala ny toerana nahitana an’ity taolam-paty ity. Tonga ny mpitandro filaminana notarihin'ny Komandin’ny brigady tamin'ny 4ora30 harivan'ny omaly.
Hotanterahina any Sarajevo renivohitr’i Bosnie ny 19 hatramin’ny 27 oktobra 2019 ny fiadiana ny tompondaka erantany amin’ny taranja « Kick Boxing ».
« Kickers » enina mianadahy, dimy lahy sy vavy tokana, no hiaro ny voninahi-pirenena rehefa nomanina nandritra ny efa-bolana. Ny alakamisy tamin’ny 3ora maraina ny delegasiona malagasy no voatondro hiala an-tanindrazana hiazo an’i Sarajevo. Tonga teny tokoa ireo « Kickers » saingy tsy afaka niakatra anaty fiaramanidina tokony horaisina hiazo an’i Nairobia Kenya, mandalo an’i Qatar, tonga any Sarajevo noho ny tsy fahampian’ny taratasy rehefa natao ny fanamarinana nialoha ny fiondranana.
Kepoka ireo « Kickers » efa nanantena hiainga, hiaraka fiara-manidina amin'ireo mpiray tanindrazana ao amin’ny Barea CHAN, hiaro ny voninahi-pirenena any Namibia.
Tafika an-dRanomasina: Mifanakalo traikefa ny Malagasy sy Frantsay
Miantsona eto Antsiranana ny 16 ka hatramin’ny 20 oktobra 2019 ny sambo mpiady Frantsay "NIVOSE". Manatanteraka fifanakalozana traikefa ny Tafika an-dRanomasina roa tonta mandritra ny fiantsonany eto an-toerana.
Nandray ity sambo ity teo am-pahatongavana ny Ambasadaoro sy ny mpiandraiki-draharaha ny fiarovana Frantsay, ary ny Sekretera Jeneralin'ny Ministeran'ny Fiarovam-pirenena Malagasy.
Misahana manokana ny fahandriampahalemana an-dranomasina eto amin'ny ranomasimbe Indianina ity sambo ity.
vendredi, 18 octobre 2019 11:12
Morondava-Menabe: Tapaka jiro, tsy misy ny rano
Misedra olana amin’ny jiro sy rano ny mponina eto an-drenivohitry ny faritra Manabe.
Tapaka ny jiron’ny JIRAMA noho olana gazoala, miampy fahasimbana milina iray lehibe mpihary herinaratra. Nanomboka omaly hariva no nitsitapitapy ny fisian’ny herinaratra.
Nandeha indray teo anelanelan’ny tamin’ny 11 alina hatramy 4 ora marainan’ity zoma 18 oktobra ity, dia tapaka hatramin’izao maraina izao. Tapaka nanaraka ny jiro ihany koa ny rano.
Hatreto tsy mbola fantatra ny hahatongavan’ny solika ho an’ny JIRAMA hiverenan’ny famatsiana jiro amin’ny laoniny.
vendredi, 18 octobre 2019 11:11
18 octobre: Journée Internationale pour la Résolution des Conflits.
vendredi, 18 octobre 2019 11:09
18 octobre: Journée Mondiale de la ménopause.
vendredi, 18 octobre 2019 11:08
18 octobre: Journée mondiale du Champagne (Champagne' Day)
18 octobre: Journée mondiale du Champagne (Champagne' Day).